Faah Faahin:Afar Jawaasiis ah oo uu Kamid yahay Jaasuuskii CIA-da ku Hagay Sheekh Abuu Zubeyr oo Gobolka Bay lagu dilay Dhageyso.
Friday June 10, 2016 - 19:01:42 in Wararka by Super Admin
Maxkamadda Wilaayada islaamiga ah ee Baay&Bakool ayaa Galabta Xukun xaddu riddo ah ku fulisay Jawaasiis u shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka iyo Sirdoonka Dalka Kenya.
Kumanaan dadweyne ah ayaa kasoo qeyb galay fagaarihii lagu fulinayay xadkaas oo kuyaalla deegaanka Buulo Fulaay ee Wilaayada islaamiga ah ee Baay iyo Bakool, iyadoona halkaas laga jeediyay hadallo kala duwan.
Jawaasiista lagu fuliyay Xukunka xaddu riddada ah ayaa kala ahaa Muxamed Aadan Nuur Xasan oo 26 jir ah, Muxidiin Hiraab Axmed oo 27 jir ah, Xuseen Nuunow Nagaaye oo 36 jir ah, iyo Xasan Diiriye Cusmaan oo 42 jir ahaa.
Jaajuuska lagu magacaabo Maxamed Aadan Nuur Xasan ayaa ka dambeeyay duqeyntii dabayaaqadii Sannadkii 2014-kii lagu dilay Amiirkii hore ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheykh Mukhtaar Abuu Zubeyr Raximahullaah.
Sidoo kale waxaa uu jaajuuskaas ka shaqeeyay duqeyntii lagu dilay Saraakiisha kala ah Cabdi-Shakuur iyo Yuusuf Dheeg oo ka tirsanaa Xarakada Shabaabul Mujaahiiin.
Sida uu Qaadigu sheegay Jaajuuska Maxamed Aadan Nuur Xasan waxa uu Sirdoonka Mareykanka kala shaqeynayay sidii uu macluumaad uga keeni lahaa Jihaazka Amniga iyo Macluumaad ku saabsan Saraakiisha sar sare ee Jeyshka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Isagoo fulinaya howshii ay CIA-du usoo igmadeen ayaa Jaajuuskani waxa uu 25-kii bishii Shawwaal ee Sannadii 1435 Hijriyada magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha hoose uu ku arkay mid ka mid ah laba nin oo ka tirsanaa raggii gaarka ahaa ee Sheykh Abuu Zubeyr, isagoona teleefonkii uu sitay Walaalkaas u gudbiyay CIA-da, iyadoona tobon maalmood kadib ay dhacday duqeyntii lagu dilay Sheekha.
Jaajuuska Muxyadiin Hiraab waxa uu la shaqeynayay Sirdoonka Kenya, gaar ahaan qeybta loogu yeero la dagaalanka Argagixisada, waxaana loosoo igmaday inuu Macluumaad ka keeno raggii ka dambeeyay howl-galkii Westgate ee dhacay dabayaaqadii 2013-kii, iyadoona uu bixiyay macluumaadkii lagu dilay walaal lagu magacaabi jiray Aadan garaar, kaasi oo dilkiisu uu ku qaatay lacag dhan kun Doollar.
Ninka Seddaxaad ee la dilay oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Nuunow waxa uu la shaqeynayay Ciidamada PS-ta Dowladda Fedraalka, gaar ahaan qeybta ku xiran Sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, waxa sidoo kale loo igmaday inuu macluumaad ka keeno Ciidamada Mujaahidiinta ee ku sugan Gobolka Bakool, isagoo markii dambe loo diray inuu Macluumaad ka keeno guryo ay daganaayeen rag Mujaahidiin ah oo kuyaallay degmada Diinsoor ee Wilaayada islaamiga ah ee Baay iyo Bakool.
Jaajuuska Afaraad oo lagu magacaabo Xasan Diiriye Cusmaan waxa uu la shaqeynayay Sirdoonka Dowladda Kenya, isagoona Unugyo Jawaasiis ah ka sameeyay Wilaayaatka Gedo iyo Jubbooyinka, waxaana loo soo igmaday inuu Macluumaad ka keeno Saraakiisha Ciidamada Mujaahidiinta ee ka howl-gala gobolladaasi.
Ugu dambeyntii Qaadiga waxa uu ku dhawaaqay in Maxkamaddu ay xukun dil ah ku ridday Jawaasiistaas kadib markii ay qirteen dembiyadii lagu soo eedeeyay, Seddax ka mid ah Jawaasiista waxaa lagu dilay rasaas, halka mid Afaraad oo ah kan ka dambeeyay dilka Sheykh Abuu Zubeyr lagu dilay qaab gowrac ah.
Halkan Ka Dhageyso Codka Qaadiga MP3